Antso avo ho amin'ny asa
Miasa ny rehetra ho amin'ny fahamendrehana Ny Fikambanana Iraisam-pirenena ATD Quart Monde sy ny Komity Iraisam-pirenena ho an’ny 17 oktobra dia manasa anao hanoina an’izao Antso ho an’ny Asa izao. Fanamby mbola tsy nisy ohatra izany no tsy maintsy atrehin’ny olombelona ary mila ny fahaizan’ny... Lire la suite
Tsy misy olona atao ankilabao : miara-mandinika, miara-manapaka, miara-miasa hanohitra ny fahantrana lalina.
Tena manan-danja tokoa io lohahevitra io satria mampitodika ny olona rehetra amin’ny ady amin’ny fahantrana. Ny olona tsirairay dia manan-jo hiaina an-kalalahana ; betsaka anefa ny olona no mbola voagejan’ny fahantrana lalina. Fomba ahoana no ataontsika mba hampanajana izany zo aman-kasina maha-olona izany eo amin ... Lire la suite
Dalle du Trocadéro en malgache
Ny takela-bato ho fanomezam-boninahitra ireo olona rehetra miaina ao anaty fahantrana lalina, eo amin’ny Kianjan’ny Fahafahana sy ny Zon’Olombelona ao Trocadéro Paris NY 17 OKTÔBRA 1987, DIA NISY OLONA MPIARO NY ZON’NY OLOMBELONA SY NY OLOM-PIRENENA AVY AMIN’NY TANY REHETRA TAFAVORY TETO AMIN’ITY KIANJA BE... Lire la suite